बार्सिलोनाका स्वारेज आर्सनलमा ! | Hamro Khelkud
बार्सिलोनाका स्वारेज आर्सनलमा !
एजेन्सी – जनवरी ट्रान्सफर विन्डोमा खेलाडी स्थानान्तरणको क्रममा जारी रहँदा आर्सनलले बार्सिलोनाबाट खेलाडी भित्र्याउन सफल भएको छ । स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका मिडफिल्डर डेनिस स्वारेज इंग्लिस क्लब आर्सनलमा अनुबन्धित भएका छन् ।
स्पेनका २५ वर्षे मिडफिल्डर स्वारेज लोनमा बिहीबार आर्सनलमा अनुबन्धित भएका हुन् । उनी यस सिजनको अन्त्यसम्म आर्सनलमै रहनेछ । त्यसपछि स्वारेजको २० मिलियन पाउन्डमा स्थायी रुपमा आर्सनलमै अनुबन्धको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
स्वारेजले बिहीबारै आर्सनलमा मेडिकल र टिमसँगै प्रशिक्षण गरेका छन् । स्वारेजले आर्सनलमा २२ नम्वरको जर्सी लगाउनेछन् । स्वारेजले आइतबार म्यानचेस्टर सिटीविरुद्धको खेलबाट ‘डेब्यु’ गर्ने सम्भावना छ ।
आर्सनलमा आएसँगै स्वारेजले यो सिजन आर्सनललाई च्याम्पियन्स लिगमा छनोट गराउने प्रयास रहने बताएका छने । यस्तै उनले आर्सनललाई यो सिजनको युरोपा लिग जिताउन आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरिने पनि बताएका छन् । उनले युनाइ इम्रीकै प्रशिक्षणमा सेभिल्लाबाट युरोपा लिग जितेका कारण यो सम्भव हुने बताएका छन् ।
२५ वर्षीय स्वारेजले सेल्टा ‘बी’ बाट सिनियर करियर सुरु गरेका थिए । त्यसपछि उनले म्यानचेस्टर सिटी, बार्सिलोना, सेभिया र भिल्लारियलबाट व्यवसायिक खेल खेलेका छन् ।